Mitondra taratry ny fanantenana ho an’ny vondrom-piarahamonina indizeny ny boky fitsipi-pitenenan’ny teny Mro voalohany · Global Voices teny Malagasy
Mila kolokoloina ny fomba amam-panao sy ny kolontsain'ny Mros The customs and the culture of the Mros need preserving
Voadika ny 13 Marsa 2022 4:51 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Español, Français, Ελληνικά, Română , नेपाली, বাংলা
Younguang Mro: “Toy ny tara-pahazavana any amin'ny havoana maizina sady lavitra any Chittagong ny bika aman'endriny.” Zavakanto sy teny nataon'i Tufan Chakma. Nahazoana alalana.
Ankalazaina isan-taona ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Tenindreny [tenindrazana] mba hampiroboroboana ny fahasamihafan'ny fiteny sy ny kolontsaina ary ny fankalazana ny tenin-drazana rehetra maneran-tany. Tamin'ity taona ity, ny zava-nisongadina tamin'ity andro ity tao Bangladesh dia ny famoahana ny boky fitsipi-pitenenana voalohany nosoratana tamin'ny fiteny Mro, fiteny indizeny tandindonin-doza.
Monina ao amin'ny distrikan'i Bandarban ao amin'ny Chittagong Hill Tracts (CHT) ao Bangladesh ny vahoaka Mro (na Mru). Araka ny fanisam-bahoaka taona 1991, 22.178 ny isan'ny mponina. Anisan'ny fianakaviamben'ny teny Sino-Tibetan ny fitenin'izy ireo.
Tamin'ny taona 1982, namolavola ny abidia Mro ny tanora 17 taona antsoina hoe Kramadi Menle. Abidia tsotra ankavia miankavanana tsy misy tarehintsoratra mitambatra izany. Saingy miadana ny fivoaran'ny fiteny. Misy ny fehezana Unicode ho an'ny Mro, saingy mbola tsy azo soratana an-jotra izany.
Vakio bebe kokoa: Ho an'ny fitiavana ny fiteny: ny boky tantara voalohany natonta amin'ny fiteny Mro
Ny fonon'ny boky fitsipi-pitenena voalohany amin'ny fiteny Mro “Totong”. Sary avy amin'i Younguang Mro sy Adibasi Barta. Nahazoana alalana.
Ny anaran'ny boky fitsipi-pitenenana voalohany amin'ny fiteny Mro dia “Totong”, ary nosoratan'i Younguang Mro, mpanoratra sady mpikaroka avy amin'ny vondrom-piarahamonina Mro ao amin'ny Chittagong Hill Tracts. Izy no namorona sy nanoratra ny fitsipi-pitenenana manaraka ny fitsipi-pitenena amin'ny endrika Bengali sy Anglisy. Na dia efa nisy boky navoaka tamin'ny fiteny Mro aza teo aloha, dia tsy nahitana rafitra fitsipi-pitenenana raikitra nosoratana mihitsy ilay fiteny.
Natomboka tamin'ny toerana tsy ara-pomba ofisialy ilay boky tamin'ny 17 Febroary 2022, tao an-tranon'ilay mpanoratra tao Ujani Para ao an-tanànan'i Bandarban. Nilaza i Younguang Mro nandritra ny lanonana hoe:
Amin'ny alalan'ity boky ity, afaka mamaky sy manoratra araka ny tokony ho izy amin'ny fiteniny ny olona ao amin'ny vondrom-piarahamonina Mro. Hanampy manokana ireo mpianatra Mro izany mba hahatakatra ny fitsipi-pitenenana Bengali sy anglisy satria manana rafitra mitovy izy ireo.
Taorian'ny nahazoany diplaoma tao amin'ny Departemantan'ny Teny Tatsinanana ao amin'ny Oniversiten'i Chittagong, miasa amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-kolontsain'ny vondrom-piarahamonina Mro i Younguang Mro. Amin'ny maha mpanoratra azy, namoaka boky miisa 28 momba ny kolontsaina sy angano Mro i Younguang hatramin'izao, 18 amin'ny fiteny Mro ary 10 amin'ny fiteny Bengali.
Nanatrika ny fampahafantarana ny boky ilay mpampianatra Mro Ngansing Mro. Nandray anjara tamin'ny fifanakalozan-kevitra izy ary nilaza hoe:
Taorian'ny famoronana ny abidia Mro, dia nampianarina ireo mpianatra miaraka amin'ny sora-tanana izany. Ankehitriny ny abidia sy ny fitsipi-pitenenana dia natao pirinty amin'ny endrika boky. Noho izany, dia ho afaka mamaky sy manoratra ny teny Mro amin'ny fomba marina kokoa ny mpianatra.
Tontosaina ankehitriny ny Ekushe Book Fair, foaran'ny boky lehibe indrindra tao Bangladesh, ary misy boky vaovao mivoaka isan'andro. Ao amin'ny Facebook, mpanoratra tanora Suhan Rizwan nanoratra ho fankasitrahana ny famoahana ny boky fitsipi-pitenenana voalohany amin'ny fiteny Mro:
Tena sarobidy amin'ny boky rehetra amin'ny foaran'ny boky io boky io.
Manasongadina ireo olan'ny vondrom-piarahamonina indizeny isan-karazany ao Bangladesh amin'ny alalan'ny zavakanto hita maso ilay tanora mpanakanto Tufan Chakma. Tao amin'ny Facebook, nanamarika izy fa “tahaka ny tara-pahazavana any amin'ireo trakta maizina any an-tendrombohitra Chittagong” ny endrik'i Younguang .
Ireo karazam-piteny ao Bangladesh
Firenena miteny Bangla (Bengali) i Bangladesh, ny 98 isanjaton'ny olona no miteny izany. Araka ny angon-drakitra nomen'ireo antrôpôlôgista sy lohandohan'ny foko ao Bangladesh, dia eo amin'ny 5 tapitrisa eo ny olona avy amin'ny vondrom-piarahamonina teratany miisa 47. Amin'ireo dia fiteny 30 eo ho eo amin'ny vondrona fiteny 4 no be mpampiasa ary fiteny 12-16 no tandindonin-doza amin'ny ambaratonga samihafa. Nilaza tao amin'ny lahatsoratra tao amin'ny vavahadin-gazety an-tserasera BdNews24.com ilay mpikaroka teratany Salek Khokon fa efa ho lany tamingana ny teny Kurukh sy Nagari. Ny teny Mro kosa dia ao anatin'ny lisitry ny fiteny tandindonin-doza an'ny UNESCO.
Sarintanin'ny fiteny ampiasaina ao Bangladesh. Sary avy amin'ny Wikipedia avy amin'ny Map Master. CC BY 3.0.
Mba hiarovana ireo fiteny tandindonin-doza, mankatoa ny zon'ny ankizy indizeny eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra voalohany ny Politikan'ny Fanabeazam-pirenena taona 2010 mba hianatra amin'ny fitenin-drazany. Faritan'ny ny politika fa « homena mpampianatra vazimba teratany sy boky fianarana amin'ny fiteny eo an-toerana ny ankizy vazimba teratany mba hahafahan'izy ireo mianatra amin’ny fitenin-drazany ». Voalazan’ny andininy faha-20 fa “Hapetraka any amin’ny faritra lavitra fonenan’ny foko (havoana na lemaka) ny sekoly ambaratonga fototra voalohany. Araka ny politika, nampiditra voalohany ny boky ho an'ny sekoly ambaratonga fototra amin'ny fiteny indizeny maromaro tamin'ny taona 2017 ny governemanta. Na izany aza, ao anaty krizy izany hetsika izany dimy taona taty aoriana, noho ny tsy fahampian'ny mpampianatra vazimba teratany voaofana.
Miankina amin’ny fahazoana fahalalana amin’ny alalan’ny fiteny ny fandrosoan’ny olona. Avo ny maha zava-dehibe ny fiteny, indrindra ny tenindreny hivoahana velona. Ary mba hianarana sy hampiharana ny fiteny iray araka ny tokony ho izy, ilaina ny fitsipi-pitenenana voarafitra. Ao anatin'izany toe-javatra izany, hampiditra tantara vaovao amin'ny fampandrosoana ny fiteny ho an'ny vahoaka Mro ny “Totong” an'i Younguang Mro.